▷ 🎮 I-Campfire Yokugcina 【Buyekeza Futhi Ulande ✅】 - 【Ukuqhathanisa】 2022
🎮 Umlilo wokugcina 【Buyekeza futhi ulande ✅】
I-Last Campfire iwumdlalo wephazili onethezekile enezinhlobonhlobo ezihlaba umxhwele zamaphazili amancane agculisayo.
Ayikho itimu eyodwa kumaphazili Wokugcina we-Campfire. Eqinisweni, azikho ngisho nezikhala ezihlukene lapho izindida zikhona. Kunalokho, yonke le adventure yendida iyindida eyodwa eyakhelwe phezu kwenye. Nokho naphezu kwalokhu, I-Last Campfire ayiyona nje indida ngemva kwendida. Indaba ebuhlungu yokusiza abanye njengoba uthola indlela yakho, futhi ngezinye izikhathi uyakwamukela ukuthi akuwona wonke umuntu obonakala ekulungele ukuqhubeka odinga ukuphushela kuleyo ndlela.
Udlala njengo-Ember, isibalo esincane esinesigqoko esilahlekile emhlabeni ophakathi kwemihlaba. Ngemva kweshwa elithile, uzithola usuphumile ngokuphelele endleleni obuyihlosile, usufuna indlela yokubuyela emasangweni akukhungathekise kangaka. Imililo embalwa isabalele ohambweni lwakho, ngayinye itholakala phakathi nendawo yama-biomes ahlukene okuyikhaya labanye abalingiswa abaningi abadinga usizo lwakho. Le miphefumulo elahlekile ngokulinganayo eyaziwa ngokuthi i-Helpless isilahle ithemba lokushiya lo mhlaba, ikuphoqa ukuba uyisize inqobe ukwesaba nokungabaza okubabuyisela emuva.
Ngayinye ibonakala njengendida elingana netimu yayo ehlukile. Ezinye izindida zibandakanya ukuhambisa into ileveli iye kuswishi enesisindo, ama-chasm okuzulazula, nama-pulley lifts. Ezinye zidinga ukuthi ugcine ilangabi elincane livutha ku-labyrinth egcwele izingozi zomoya noma, ngokunengqondo, uvule ibhulokhi ukuze ukhanyise izibani eziseduze ngaphandle kokucisha ilangabi. Izinhlobonhlobo ezibanzi zezindida ziyamangaza, kanjalo nomklamo wazo ohlakaniphile, okwenza kube lula ukuqonda isimo sawo wonke umuntu. Azikho izimfumbe ku-The Last Campfire ezikhathazayo, kodwa ngayinye iyakwazi ukuvusa umuzwa wokufeza okuthile ngesixazululo sayo.
Izindikimba zamaphazili nazo zikhombisa izinkinga zabalingisi abawafukamele, ucezu ngalunye olumnyama lwendida luvela njengokuphazima kwemicabango yabo. Lezi zindaba ezincane zivela njengoba uqhubeka nesixazululo sakho, ngokulandisa kwesitayela sesintu esinikeza umongo othakazelisayo wesenzo sakho ngasinye. Isibonelo, irobhothi eligqwalile elake lazicabangela ngokweqile labona inhlansi yalo yokudala incipha, indida ekuholela kuleyonhlansi encane futhi yasiza ukuyivusa elangabini elibhongayo. Kokunye, imicabango yoMntu Ongenakhaya okhathazekile ibonakala njengengxubevange yamapayipi angaphelele, ikucela ukuthi uthole indlela ecacile phakathi nokudideka. Ngisho nobuningi bezindaba, ngazizwa ngiphoqelekile ngayinye, nakuba ubufushane bazo kwangenza ngafuna ukuba nethuba lokuhlola umlingisi ngamunye ngokuqhubekayo.
I-Last Campfire iphinda ibonise ukuzithiba, izinhlamvu eziningi ezenqaba usizo luka-Ember. Umlayezo wakhe awuningi kangangokuthi zonke izinkinga zinesixazululo, kodwa ukuthi izixazululo ngokwazo kufanele zicatshangelwe kahle ngaphambi kokuzama. Abanye babalingisi ku-The Last Campfire abekho esigabeni lapho sebelungele ukwamukela usizo luka-Ember, futhi kuyadabukisa ukuthi igeyimu iyizimele ngendlela ebekezelayo.
Isikhungo ngasinye esincane esihlala laba balingisi kanye nezindaba zabo siyigumbi lendida ngokwalo, elethula izinkinga eziyinkimbinkimbi kakhulu okufanele zixazululwe. Ezinye zalezi zindida zidlala njengomdlalo wokuzidela, lapho kufanele ufune izinto ezithile ukuze uxazulule izinkinga, njengokufumbathisa ixoxo elikhulu ngesikelemu esikhulu, esimanzi ukuze likunikeze indlela eya endaweni entsha. Nakuba zenzeka endaweni enkulu, izisombululo zalezi zindida zigcinwa ziqondile, namacebiso awusizo okukuholela ezisombululweni uma uzithola ubambekile. Imikhondo ayiphazamisi ubumnandi bokuthola isisombululo uwedwa, kodwa ikusiza ukuthi ikukhombise indlela okuyiyonayona uma uke wadlula endaweni futhi waphuthelwa indlela ecashile necashile.
Amanye ama-puzzle ayinkimbinkimbi kakhulu ekwethulweni futhi amanye angcono kakhulu I-Last Campfire okufanele inikeze. I-maze yehlathi elinenkungu igqame lapha, ngesakhiwo esifana nalesi esitholakala ku-The Legend of Zelda: I-Link's Awakening, kodwa enomshini wayo okhumbuleka ngendlela ehlukile. Esikhundleni sokubamba ngekhanda indlela elungile ngochungechunge lweminyango enenkungu, kufanele udabule kuyo uyofuna izinhlamvu zemali zemephu yetshe emaphakathi. Ngokutholwa kwegumbi ngalinye elisha, ungakwazi ukuxhaphaza imizila yeminyango eseduze kwakho, udale izindlela eziya ezindaweni ezintsha ebezingafinyeleleki ngaphambilini. Kodwa njengezindida zayo ezincane, eziqukethwe ngokwazo, i-The Last Campfire ibhalansisa ubunzima bayo nalezi zindida zesikali esikhulu, ikuphonsela inselelo ngobumnene kodwa iphinde ichaze izinjongo zendida ngayinye kanye nezindlela ongazixazulula ngayo.
Ukuhlola ngayinye yalawa ma-biomes nakho kuyinjabulo yokubonga ngesikimu sombala esinempilo kanye nedizayini yomhlaba wonke ye-The Last Campfire. Izinhlamvu zakhona zisukela kokubukekayo kuye kokusabisayo, nompheki owamukelayo olungisa isitshulu esimnandi phezu kwekhawuldron enkulu emnyama ebekwe ngokumelene nenyoni ewumbhoshongo esihlalweni sobukhosi samatshe esibandayo esikukhuthaza ukuthi ubeke uhambo lwakho eceleni. Kulula ukugxumela emhlabeni ongaqondakali we-The Last Campfire, kodwa izinkinga zokusebenza ngezinye izikhathi ziphula ukukhanga kwakho. Ku-Nintendo Switch, izinga lozimele lalivame ukwehla ngesikhathi soshintsho lisuka emhlabeni omkhulu liye kuma-puzzle azimele, njengoba lalikhasa ngendlela engaqondakali ezindaweni ezincane, ezingenalutho. Akuvimbeli ukudlala okuhamba kancane, kodwa bekujwayelekile ngokwanele ukuthi kucasule.
Kodwa lapho i-The Last Campfire ithuka, okwenzeka kaningi, kunzima ukungacwi ijubane layo elihelezayo kanye nokuxazulula iphazili egculisayo. Ayilokothi idlulele ngale kokwamukela kwayo noma iphushe imibono yendida ibe ngaphezu kwemikhawulo yayo, ishiya ngayinye ishiya umbono naphezu kobufushane bayo. Indaba ye-The Last Campfire ihlanganisa ngayinye yazo ngama-anecdotes amancane, ivumela umcabango wakho ugcwalise izikhala zomhlaba wawo phakathi kwemihlaba ngokumelene nokwasemuva kwezithombe zayo ezimibalabala. Kuhlala kuwukuzithokozisa okuphumuzayo nokujabulisayo.
Ungalanda kuphi i-Last Campfire